Lugood Mavericks shawladda kaabta: Waraaqda kaabta Lugood ee Mavericks
> Resource > Lugood > Lugood shawladda kaabta u Mavericks, Waraaqda kaabta Lugood on Mavericks Mac ah
Meeh Lugood gurmad faylka ku yaalla Mac OS X Mavericks (10.9)?
Ma la casriyeeyay aad Mac in Mavericks ugu dambeeyey? Wax macno ah ma, weli gurmad Lugood ee file waxaad ka heli kartaa halkan:
/ Users / username / Library / Codsiga Support / MobileSync / kaabta /
Fiiro gaar ah: isgarad-ka beddel sida magaca Mac waxaa.
Waxaan si toos ah arki kartaa macluumaadka ku jira gurmad Lugood ee Mavericks?
Jawaabtu waa MAYA, xataa tan nidaamka Mavericks cusub. Waxa ay u muuqataa in Apple ma beddeli doonaa waxa maskaxdiisa si ha gurmad Lugood ee file noqon akhrin on your computer. Si aad u helaan, waxaad u baahan tahay in ay ku tiirsan yihiin qalab dhinac saddexaad sida Lugood gurmad shawladda u Mavericks. Noocan ah qalab aad u awood Macdan content ee faylka gurmad oo dhan on your computer akhriska.
Sida aynu soo saaro karaa Lugood gurmad files ee Mavericks
Bilowga, heli Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) degsan oo lagu rakibay on your Mac. Version ayaa maxkamadda hoose waa lacag la'aan. Markaas raac tallaabooyinka soo saaro gurmad Lugood hadda.
Tallaabada 1. Dooro gurmad Lugood ee aad iPhone oo Macdan
Marka aad u this Lugood gurmad shawladda u Mavericks on your computer, aad arki doonaa laba hababka soo kabashada on sare ee ay suuqa kala weyn. Dhaqaaq ah ee kaabta File soo kabsado Lugood hab, ka dibna waxaad arki doonaa suuqa kala hoose. Waxaa oo dhan Lugood gurmad files on your computer waxaa la helay iyo soo bandhigay liiska. Hadda oo kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah si aad u iPhone iyo riix Start Scan button in uu horay u socdo.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh gurmad Lugood ee content
Ka dib markii iskaanka ah, aad sabab u scan heli doontaa sida ku cad suuqa kala hoose. Waxaad ku eegaan kartaa dhammaan faahfaahinta file gurmad ah, sida sawiro, videos, xiriirada, fariimaha, qoraalada, soo wac taariikhda iyo wixii la mid ah. Haddii aad rabto in aad iyaga ku badbaadin si aad u computer, waxaad dooran kartaa alaabta oo guji badhanka uu soo kabsan iyaga badbaadiya ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ma aha oo kaliya xogta jira in gurmad Lugood ah, taas Mavericks Lugood gurmad shawladda sidoo kale ka heli kartaa macluumaadka la tirtiray ee file gurmad ah, ilaa iyo inta aan overwritten. Waxaad iyaga ku hubin kartaa in waxyaabaha orange.